के तपाईको हातमा पनि छ करोडपति बन्ने रेखा ? खोज्नुहोस् – Sandesh Press
के तपाईको हातमा पनि छ करोडपति बन्ने रेखा ? खोज्नुहोस्
November 11, 2021 178
सबै जना करोडपति बन्न चाहन्छन्। प्रत्येक व्यक्ति धेरै धन र सबै प्रकारका सुखसुविधा साधन चाहन्छ, तर यी सबै चीजहरू सबैको भाग्यमा हुँदैनन्, किनकि यो केवल यिनीहरुलाई मात्र उपलब्ध छ जसको हातमा यो यो रेखा छ।
सफलता व्यक्तिको हातमा लुकेको हुन्छ । हातको रेखाले व्यक्तिको भविष्य जान्न सकिन्छ । जुन मानिसको हातमा भाग्य रेखा हुन्छ, तिनीहरु धन हुन् । उनीहरु जीवनमा उच्च पद प्राप्त गर्दछन्।
आउनुहोस् जानौँ भाग्य रेखाको बारेमा :
भाग्य रेखा सबैको हातमा हुँदैन । भाग्य रेखा केवल भाग्यशालीहरुको हातहरूमा पाइन्छ। हातमा यो रेखा चन्द्र पर्वतबाट शुरु भई बृहत्तर पहाडमा समाप्त हुन्छ। त्यस्तो रेखा भेटिने हातहरू करोडपतिहरू हुन्। भाग्य रेखा मस्तिष्क र हृदय रेखाको माध्यमबाट जान्छ।
सीधा र निर्दोष भाग्य रेखा
भाग्य रेखा जति लामो र दोषरहित हुन्छ व्यक्ति उत्ति नै भाग्यशाली हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन सुखी र आनन्दमय हुन्छ। जीवनमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कुनै प्रकारको कमी हुँदैन ।
भाग्य रेखा सानो र टुक्रिएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई जीवनमा अवरोध वा संकटको सामना गरिरहनु पर्दछ । टुक्रिएको भाग्य रेखाले जीवनमा हुने नोक्सानीको बारेमा पनि बताउँछ।
सिधा लाइन सबैभन्दा राम्रो भाग्य रेखा मानिन्छ। जसको भाग्य रेखा चंद्र पर्वतबाट शुरु भएर बृहस्पति पर्वत नजिकै समाप्त हुन्छ, त्यस्तो भाग्य रेखा सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। राहु स्थानबाट सुरु हुने भाग्य रेखाले व्यक्तिलाई जीवनमा अचानक लाभ दिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले जीवनमा अचानक सम्पत्ति पाउँछन्।
मजबुत भाग्य रेखा हूँदाहुँदैपनि लाभ प्राप्त नभए
कहिलेकाँही यो पनि देखिएको छ कि जो व्यक्तिको हातमा मजबुत भाग्य रेखा छन् तर पनि पूर्ण लाभ प्राप्त गर्दैनन्। यसका लागि प्रत्येक साँझ भगवान् शिवको पूजा गर्नुपर्दछ र घरको मूल ढोकामा घिउको बत्ती बाल्नु पर्छ। यो गरेर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुन्छिन् र आशीर्वाद प्रदान गर्दछिन् ।
Prevबैंकका कर्मचारी धमाधम पक्राउ, कारण थाहा पाउँदा तपाईपनी डराउनुहुन्छ
Nextगर्भको ७ महिने छोरासँगै संसारबाट बिदा भइन् श्रीमती: २४ घण्टा नबित्दै श्रीमान पनि अस्ताए
श्रीमानले सुटुक्क श्रीमतीको ला स ज लाउन लगाएपछि,यसरी राम धु लाई भेटे (भिडियो हेर्नुस्)